Xildhibaankii saddexaad oo shaaciyey inuu ka baxay Xisbiga Midowga Nabadda iyo Hormarka – Kalfadhi
Xildhibaankii saddexaad ayaa isaga baxay Xisbigay Midowga Nabadda iyo Hormarka (UPD), iyada oo Xildhibaankan iyo labadii ka horeysaba aysan si cad u sheegin sababaha ay uga baxeen xisbigaas. Xildhibaan Cali Cabdi Cusmaan ayaa bartiisa Feysbuuga ku soo qoray inuu maanta wixii ka dambeeya hakiyey xubinnimadiisii Xisbiga UPD.
“Waxaan ahaa xubin ka tirsan Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD). Waxaan rabaa halkaan in aan idin kala wadaago laga bilaabo 26-ka Janaayo, 2019 in aan cadeeyo in aan iska hakiyey xubinnimadii Xisbiga UPD” ayuu Xildhibaan Cali Cabdi Cusmaan ku yiri dhigaal uu maanta ku soo daabacay Feysbuuggiisa. Isaga oo shaacintiisa inuu Xisbigaas isaga baxay kadib bogaadinaya UPD ayuu yiri “asxaabteyda UPD waxaan u rajeynaa guul, horumar iyo in uu UPD Xisbi Qaran noqdo”.
Horay waxaa Xisbigaas uga baxay Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo 30-ka bishii hore isna Feysbuuggiisa ku shaaciyey inuu ka tanaasulay xubinnimadiisii UPD. 22-kii bishaan, Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris (Ganey) ayaa isna noqday xubinkii labaad ee bartiisa ku shaaciya inuu ka baxay Xisbiga UPD. Dhamaantood ma sababeen ka bixistooda xisbigaas. Weyna wada bogaadiyeen.
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Hormarka (UPD), oo uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud, wali kama hadlin ka bixistaan ay xubno gaaraya saddex bil gudaheed uga baxeen xisbiga, taas oo marka la fiiriyo loolanka siyaasiga ah ee ka taagan dalka dhaawac ku ahaan karta magaca xisbiga oo dhawaan uun la abuuray.
Madaxweyne Farmaajo oo goordhaw gaaray magaalada Garoowe